US-China ooVimba beeMbango zoRhwebo-Funda ukuRhweba
tag: Impikiswano yezorhwebo yase-US-China
Isigaba sokuqala seNtengiso yase-US-China yoRhwebo ngokuBanzi kwiMali eziNkulu, uYuan uQinisekile
Ukuhlaziywa: 24 Disemba 2019
I-Yuan yase-China khange ichaphazeleke emva kokuba u-Nkulumbuso u-Li Keqiang ethe abaphathi babecinga ngamanyathelo ongezelelweyo okunciphisa iindleko zezemali, kwaye babhekisa kunciphiso "ekujoliswe kulo" kumyinge obekiweyo weebhanki. I-yuan ye-Offshore igqityiwe ukutshintshwa ngo-7.007.
Ngelixa i-euro iwele ngolwe-Lwesibini, ibuyela kwishumi elinesine leentsuku eziphantsi, inqanaba lokuqala lezorhwebo lase-US kunye ne China laqhuba idola, nangona iimarike zemali zazithe cwaka ekuqaleni kwexesha leKrisimesi.
I-Sterling, eyawa iintsuku ezintlanu zilandelelana, yaphinda yaziva iphantsi koxinzelelo kwidola, njengoko uloyiko luhlala ngenxa yengxaki yeBrexit kunye nokuhlawulwa kwemali ephantsi kwahlanganiswa ukonzakalisa imali.
Ixesha lokugqibela le-euro lehla nge-0.2% ukuya kwi-1.1084 yeedola. Idola, xa kuthelekiswa nebhasikithi yezezimali, ikhule nge-0.1%, kunye nesalathiso kwi-97.76.
Idola yase-Australia yafudukela kwiinyanga ezintlanu eziphakamileyo. I-Aussie inokuthi, ngokubanzi, iphumelele xa imeko entle inyukile ngokubhekisele kurhwebo lwehlabathi kunye noqoqosho lwaseTshayina. I-United States ne China zibhengeze isigaba sokuqala seengxoxo, kwaye iimarike zikholelwa ukuba ukupheliswa komlilo kuyandisa ukungafani kwabo ekudala bekho.
Idola yase-Australia inyuke yaya kuthi ga kwi-0.6930 yeedola, njengenxalenye yokwahlulahlula okuphezulu kwayo nge-13 kaDisemba nge-0.6939 yeedola, elona nqanaba liphezulu ukusukela ngasekupheleni kukaJulayi. Imali ikhule ngaphezulu kwe-1% kwiveki ephelileyo.
Abatyalomali bathi ukuba sesichengeni kokungaboni ngasonye kwezorhwebo phakathi kweWashington neBeijing kunokufikelela kwi-2020.
Imiba yezorhwebo isekude ukuphela, ke uMnu. Trump angaqala ukuphikisana kunyaka omtsha, kwaye kude kuchaphazele ukukhula kwe-US, kungabonakala kuyinto eqhelekileyo kubavoti, "utshilo uDavid Madden, umvavanyi kwiiMarket zeCMC.
Idola yaseNew Zealand yehle i $ 0.6632, ngaphantsi nje kweenyanga ezintlanu eziphakamileyo zeedola 0.6639 efikelelwe ngoMvulo.
I-Sterling iwele kwi-1.2938 yeedola emva kokufikelela kwiiveki ezintathu eziphantsi kweedola eziyi-1.2905 ngoMvulo. Iwile okoko u-Nkulumbuso u-Boris Johnson engazange avume ukwandiswa kwamaxesha enkqubela phambili ngaphambi kokuba i-Bhritane iphume kwi-European Union ngo-Disemba ka-2020. Abaninzi bakhathazekile kukuba eli lixesha elifutshane kakhulu ukuba elinye ixesha lesivumelwano soqoqosho ne-EU.
Silindele ukuba uloyiko lweengcali zezezimali malunga nokuncitshiswa komngcipheko weBrexit luza kuncipha njengoko amandla ezopolitiko angayonyusi umngcipheko wothuskiso lwemali, utshilo uStephen Englander, intloko yesifundo sehlabathi se-G10 FX e-Standard Chartered Bank.
Ke, akukho sizathu sokulindela ukuba ibhalansi yezopolitiko inokuhla; oku kunokuchaphazela ukungalindeleki okuphezulu. Siyabona ukuba iponti iya isiba sesikweni ngakumbi, kodwa ngokutsiba okubukhali.
Kwi-euro, ukufunyanwa okubalaseleyo kubuyiswe nge-0.2% ukuya kwiipesenti ezingama-85.59.
Kwi-yen yaseJapan, idola yahlala ingatshintshanga kwi-109.40.
tags Aud, Euro, NZD, Isigaba sokuQala, Sterling, Impikiswano yezorhwebo yase-US-China, yen, Yuan
Igolide iye yadityaniswa njengoko iiSheya ziphakama ngenxa yokuhla kwexhala lezoRhwebo
Ukuhlaziywa: 20 Disemba 2019
Igolide ibambelele kumda othintelweyo weedola ezintlanu ngolwesiHlanu, njengoko abatyali zimali behleli bengaxelwanga ngaphambi kwexesha leKrisimesi nanjengoko utshintshiselwano ngezokhuseleko sele lufikile kumanqanaba eerekhodi phakathi koloyiko lwenkxalabo yorhwebo phakathi kweMelika ne China.
Ixabiso legolide alikhange litshintshe kwi-1,478.90 yeedola nge-ounce, kodwa ke laxhasa amandla alo kwiveki yesibini elandelayo. Ikamva legolide lase-US laphosa i-0.1% ukuya kwi-1,482.60 yeedola nge-ounce.
Iziphumo ze-bullion zazithintelwe emva kokukhutshwa kubonise ukukhula koqoqosho lwase-US kwikota yesithathu, phakathi kweempawu zokuba uqoqosho ngandlela thile belugcina isantya esimiselweyo sokongezwa ngaphambi kokuphela konyaka.
Ukuhlala kweDola kuzinzile kuzinzo lwe-US
Idola liqinile kuba iUnited States ngoku izinzile. Ulwazi lwe-GDP yaseMelika luze kakuhle, lubonisa ukuba i-US inefuthe.
Ulwazi oluqhubekayo oluqinisekileyo loqoqosho kunye nemvakalelo elungileyo malunga nembambano yorhwebo phakathi kweMelika kunye ne China zixhase uqikelelo lokuba iUS Federal Reserve ayinakuphungula inzala kwakhona kungekudala. UNobhala Wezemali wase-US uStephen Manuchin uthe i-United States kunye ne China bazakuvuma kwisivumelwano sorhwebo kwisigaba esiphambili ukuya ekuqaleni kukaJanuwari.
IGolide inyuke njengendawo ekhuselekileyo ngokungenakuphikiswa ngaphezulu kwe-15% minyaka le ngenxa yokoyika ukudodobala koqoqosho kwihlabathi liphela, ngenxa yengxabano yeenyanga ezili-17 yorhwebo phakathi kwala mazwe mabini oqoqosho olukhulu. Ithuba lokuba izivumelwano ziya kuhamba ngokulula ziya kutsala ingqalelo kwigolide.
Abatyalomali kunye nabarhwebi bakhokelela ekugxininiseni kwabo kwimisitho ezayo kunye nezayo, kubandakanya nezicwangciso zabo, kwaye ngale ndlela, ukurhweba kushishino kunye nenani lokuthengisa mhlawumbi liza kuncipha kwezi veki zimbini zilandelayo, "uJim Wakeoff, umhlalutyi oyintloko kwiiKITCO Metals, watsho kwinqaku.
Phakathi kwezinyithi ezahlukeneyo ezixabisekileyo, i-palladium yehle nge-2.7% ukuya kwi-1,884.30 yeedola nge-ounce, kwindlela yayo eya kwingozi yokuqala yeveki ezintlanu. Emva kokubetha irekhodi eliphezulu le- $ 998.43 ngolwe-Lwesibini, isinyithi siphume malunga ne- $ 116 ukuya kwi-2.6% ngeveki.
IPlatinamu yaphosa iipesenti ezi-1.5 ukuya kwi- $ 919.77, ngelixa isilivere inyuke nge-1% ukuya kwi-17.22 yeedola. Isilivere iyandisile inzuzo yayo kwiveki elandelayo, inyuka nge-1.6%.
tags igolide, Isigaba sokuQala soRhwebo, Impikiswano yezorhwebo yase-US-China
Ukujongwa kwiNtengiso engaphambi kwee-Payrolls ze-US ezingezizo ezokuFama
Ukuhlaziywa: 6 Disemba 2019
Ngenxa yoku ukuphuma namhlanje e-United States yingxelo yemirhumo ye-nonfarm ka-Novemba. I-poll eyenziwe nguDow Jones iqikelele ukwanda kwemisebenzi eyi-187,000 ngelixa ukuqikelela izinga lokungabikho kwemisebenzi kukuba lingahlala lizinzile kwi-3.6% eyayibhalwe ngaphambili eyayikufutshane neminyaka engama-50 ephantsi. I-economists ikwabikezela ukuba i-0.3% inyuswe kumvuzo ophakathi weyure. Uqikelelo lokonyuka kwe-0.4% kulindelo lwabathengi ngoDisemba ukusuka nge-95.6 yeepesenti ye-Novemba ibambe.
Phambi kwezibalo eziza kukhutshwa, kwicala laseAsia, izalathiso zesitokhwe ziphakame kunye ne-South Korea KOSPI Index ibeka itshathi yeyona nzuzo inkulu, eqhutywa yiSamsung Electronics kunye ne-SK Hynix kwangoko.
Ngeeyure zokuqala namhlanje, i-Nikkei 225 Index, iShanghai Index, iHong Seng Index yaseHong Kong yonke ithengise inzuzo ephezulu yokudibanisa.
Amanani emivuzo yabangengabo basezifama azakukhutshwa namhlanje ngo 13:30 GMT. Kukwanje namhlanje ludliwanondlebe noLarry Kudlow kwi-CNBC enokuthi inike olunye uhlaziyo kwiintetho zorhwebo.
Iindaba ezingakumbi zase-US
Ngaphambili, izitokhwe zase-US zawa xa uMongameli uTrump wabhengeza ukuba isivumelwano sokurhweba singabanjwa kude kube nguNovemba 2020 xa unyulo lwase-US luzakubanjwa.
Enye ingxelo ibeka ukuba i-China icatshukiswa ngumthetho osemthethweni wase-Uighur ngelixa elinye lisithi ezoqoqosho zibini ziphambili zisengquzulwano ngokusekwe kubungakanani bemveliso yezolimo ethengwe yi China.
Omnye umthombo oxhalabisayo yindlela iTshayina eye yasilela ngayo ukunika naluphi na uqinisekiso lokuqinisekisa ukusuka esiphelweni sayo.
Nangona kunjalo, ithemba elincinci lakhanyiswa xa ingxelo evela eBloomberg yacaphula ukuba la mazwe mabini kungekudala aza kuvuma kwisivumelwano sokuqala sokurhweba ngokubuyiselwa umrhumo. Kwakhona, uMongameli uTrump akabonakalisanga phawu lokwahluka phakathi kwala mazwe mabini njengoko ecatshulwe ukuba iintetho ziqhubeka kakuhle.
Imakethi ibonakalise iimpawu zokubuyela kwenye indawo ngokusekwe kule ngxelo intle.
Okungakumbi okuvela eAsia
Idrophi yarekhodwa kwinkcitho yeKhaya yaseJapan eyayiqala ukurekhodwa ukusukela ngoDisemba 2018.
Inkcitho yekhaya ka-Okthobha yehle nge-5.1% xa kuthelekiswa namanani ayo e-2018 awona kwehla kukhulu ukusukela ngeyoKwindla ngo-2016 xa ukwehla kwe-5.3% kwarekhodwa. Abezomnotho babeqikelele ukwehla nge-3% ngokomyinge.
tags Intlawulo engeyiyo yeFama (NFP), Impikiswano yezorhwebo yase-US-China
I-EUR kunye ne-CAD Hlala ujolise kwiVeki yokuVala
Ngelixa iveki isondela esiphelweni, masiqwalasele ezemali, imakethi ichaphazela izibalo ezikhutshiweyo kunye nezo sele ziphumile ngenxa yeempembelelo ezenziwe.
Unyulo oluzayo lwase-UK belugxile kuphononongo lwe-YouGov oluchaza ukuba uninzi luza kuphumelela. Kwangoko namhlanje, naluphi na uhlaziyo kwizimvo zovoto oluqhutywa kutshanje ziya kuba nefuthe kwintengiso. Ukuphuma kamva namhlanje yingxoxo kamabonwakude ye-BBC eza kusasazwa ngqo.
Abatyalomali balindele ngolangazelelo impendulo yase-China kwimithetho eyilwayo yamva nje edluliswe yi-United States ukuxhasa amalungelo abantu eHong Kong. Ukuba i-China ithatha isenzo sokuziphindezela, inokuba nobunzima kwizimali.
Ukugxila kukwakhona nakuphi na ukuhlaziywa okwangoku kwiintetho zorhwebo ezazibonakala ngathi zihambile inkqubela kwezi veki zimbini zidlulileyo zixabisa idola kunye nezinye izinto ezinobungozi.
Amanani aphembelela intengiso
IJapan isandula ukukhupha amaxabiso emveliso kunye nemveliso zorhwebo, u-Okthobha ukwakhiwa kwemvume evela eNew Zealand ene-1.1% yokuwa kunye namanani abucala eentengo zemboleko akhutshwe e-Australia nawo abe nefuthe kwintengiso kwiyure zokuqala namhlanje.
Okunempembelelo kwintengiso yinkcitho yabathengi kunye namanani e-GDP aphuma eFrance, ukuthengiswa kweentengiso kunye namanani abantu abangaphangeliyo aphuma eJamani.
Ukuba imicimbi ihamba njengoko bekuxeliwe, amanani emali anokungabinampembelelo ibalulekileyo kwi-Euro ngelixa ezinye ezimbini ezingumthengi zichitha imali kunye namanani abantu abangaphangeliyo aya kubalwa.
Izinga lokunyuka kwamaxabiso ngonyaka lingaphantsi kwepesenti ukuba ke kukho naluphi na ukonyuka; isenokungabi ngunobangela wokukhathazeka kwi-Central Bank yaseYurophu, ke ayinakuba nefuthe.
Inani eliqikelelweyo lokunyuka kwamaxabiso ngoNovemba lifanelekile ukuphuma e-Itali nakwi-Eurozone; abatyali mali bakwalinde amanani e-Eurozone yokungaphangeli ngo-Novemba.
Akukho zibalo zichaphazela izibalo zeponti kwaye i-USD inike iholide yombulelo eMelika.
Kwi-CAD, izibalo ezinefuthe kwintengiso zekota yesithathu ye-GDP kunye ne-Okthobha amanani e-RMPI anikwe iBhanki yaseCanada yomgaqo-nkqubo wezemali wokuthatha isigqibo kwiveki ezayo.
Ukuma kwaNgoku kweZimali
I-Kiwi Dollar inyuke yaya kwi-0.64184 yeedola kwixabiso elidlulileyo le- $ 0.64181 ngenxa yezibalo zemvume yokwakha. Okwangoku, i-Kiwi Dollar ime kwi-0.02% ukuthengisa nge-0.6421 yeedola.
I-EUR inyuke nge-0.02% ukurhweba nge- $ 1.1011. Iphawundi yehle nge-0.01% ukuya kurhwebo nge- $ 1.2911. I-Dollar Spot Index yehle nge-0.05% kwindawo yokuma kwi-98.325.
I-CAD yehle nge-0.02% ukuma kwi-C $ 1.3285, xa kuthelekiswa neDola yaseMelika.
tags Hongkong, Impikiswano yezorhwebo yase-US-China, I-UK Geopolitics
Utyalomali oluthe ngqo lwaNgaphandle lwaMazwe ngaMazwe Ichaphazeleka kakhulu kwiNgxwabangxwaba yoRhwebo yase-US-China
Ukuhlaziywa: 29 October 2019
Imixholo ephambili: I-FDI, I-US-CHINA IIMPIKISWANO ZORHWEBO
Mva nje, ii-asethi ezinomdla ekukhuleni ziye zafumana kwaye zaphuculwa ngo-Okthobha njengoko ulindelo oluqinisekileyo kubarhwebi luzingisa
* Ngayiphi na imeko, enye into ekhutshiweyo irekhodisha utyalomali lwamazwe aphesheya, kolona phawu lwamva nje lwembambano yorhwebo emva
* Imeko enokuthi ihlale ihlala ingenakulindeleka kuseto olunobungozi kangangexesha elithile
Abaqikeleli kwihlabathi liphela babonakala beqinisekile ngakumbi ukuba iimeko ezingcono ziseza njengokuthembela kwiindleko eziphantsi zokuboleka e-US kwaye, mhlawumbi, isivumelwano kuthethathethwano kurhwebo phakathi kweWashington neBeijing sityhala isitokhwe kwiindawo eziphakamileyo zembali eNew York.
Le meko icace gca kwiimarike ze-equity, ezinokuba sesona sibonisi siqaphelekayo sokuzithemba kodwa iimali ngonxibelelwano oluqinileyo, oluqinisekileyo kuphuhliso lwehlabathi, umzekelo, iDola yase-Australia iyaphucula ukongeza.
Nokuba kunjalo, nokuba imeko yangoku yokukhula kweemarike ezinxulumene nemali inengqiqo okanye ayifikeleli kwiziphumo zayo, kukho ukukhula kobungqina bokuba iingcinezelo zorhwebo ziyaqhubeka nokumba nzulu koluqoqosho langoku lwehlabathi ngendlela enokuthi ukunciphisa imfuno yexesha elininzi elizayo.
Umbutho weNtsebenziswano yezoQoqosho noPhuhliso uvavanya ukuba imijelo yoTyalo-mali lwaNgaphandle ngokuthe ngqo inciphise phantse ngama-20% kwisiqingatha sokuqala salo nyaka. Ikota elandelayo ibone imingeni ethile kwi-FDI plunging 42%. Zombini iYurophu kunye ne-US zikubonile ukwehla okukhulu kwi-FDI nakwicala le-flip, i-China irekhode ngaphezulu, kodwa incinci.
Ukukhutshwa kweendaba bobona bungqina bakutshanje bokuba imiceli mngeni kwezorhwebo inoxanduva lokuhambisa umjelo wehlabathi ngokuhamba umva.
Uphuhliso lwase China luyancipha ngenqanaba le-6% eyoyikekayo ngoku ikakhulu kumbuzo. Ukuthumela ngaphandle izigebenga iJapan kunye ne-South Korea ziyadada. Umdibaniso weMelika uye walumkisa ngaphezulu kwesihlandlo esinye ukuba inzala yokuthengiswa kwayo ivela e-China inombuzo.
Ngaba kunokwenzeka ukuba ukurhweba ngexabiso lokutshintsha imeko?
Okwangoku kunokucingelwa ukuba ukuxoxa ngokukhawuleza, okubanzi phakathi kwe-US kunye ne-China kungashenxisa lonke uxinzelelo lworhwebo olufihliweyo kunye nokuqhubela phambili umngcipheko wee-asethi ezikhukula ngaphezulu kwelinye ixesha. Kuyo nayiphi na imeko, iimarike zisenokudala iimeko eziphazamisayo xa bevuma ukuba olona tshintsho lwamva nje kumashumi amabini eminyaka kurhwebo olukhululekileyo kunye neerhafu ezisezantsi zibuyela rhoqo njengoko bebeyazi. Ukukhutshwa kwe-OECD kunokubonakala ngathi kuqinisa olu hlalutyo.
Kwimeko yokuba abaqikeleli bacinga ukuba amaxesha adlulileyo ayabuya, i-FDI inokuba ihambile kakhulu. Iindleko zeoyile, ngokunjalo, azicebisi ukuhambisa uqikelelo lweemfuno zehlabathi. Banokuba bandile ukusukela ngeentsuku zika-Okthobha ezibuyela umva, kodwa imeko ejonge ezantsi ihlala ihleli ngakumbi kwaye abavelisi ababalulekileyo banokuphinda basike iithagethi zonyaka kwakhona.
Ukuyibeka ngokucacileyo, uthethathethwano lwezorhwebo phakathi kwamazwe amabini anoqoqosho olukhulu lunokuba loloyiko, nangona kunjalo, alunakulungisa wonke umonakalo owenziwe ngaphambili.
Imvelaphi inokuhlala izinzile ngokubonakalayo kwiindawo ezikhuselekileyo ezinjengeYen yaseJapan kunokuba ibonisa ngoku, njengoko uphuhliso oludityanisiweyo lunokuba kumlo omkhulu. Khumbula ukuba, njengoko i-AUDUSD ishukuma ngokucekeceke kwinyanga ephelileyo, ihlala ingcwatyelwe kwindawo ende esezantsi ethe yafikelela kwimarike ukusuka esiphelweni se2018.
tags Utyalomali oluthe ngqo lwaNgaphandle (FDI), Isivumelwano soRhwebo, Impikiswano yezorhwebo yase-US-China
Izabelo e-Yurophu zigqityiwe ukuPhakama ngokuPhezulu njengee-speculators Thatha umjikelo omtsha woNcedo lweZiko
Ukuhlaziywa: 28 October 2019
Amalungu ebhloko ye-European Union athetha malunga nobude bokumiswa kwetyala kwixesha lase-UK. Okthobha 31 ixesha lokuphuma lokushiya i-EU.
Inkulumbuso yase-UK okwangoku ithembise ukunika abameli base-Bhritane ithuba elingakumbi lokuxoxa malunga nokuxoxisana kwakhe malunga nelungelo lokuba babuyisele unyulo ngomhla we-12 kuDisemba.
Izabelo e-Yurophu zigqibile ukuya phezulu ngolwesiHlanu emva komjikelo wesisa weenzuzo zomdibaniso, ngelixa abathengisi ngokufanayo beqwalasele imeko yeBrexit kunye nengxoxo ezixineneyo phakathi kwe-US nayo, China.
I-European Stoxx 600 igqityiwe ukuphakama okwethutyana nge-0.12%, kwaye isitokhwe esithengisayo sifumana nje ngaphezulu kwe-1.1% ukukhokelela kwimivuzo njengeziselo kunye nokutya okuye kwaphantsa phantse i-1.7% ngelixa ulwahlulo kunye neebour bourses zibonakalise ngeendlela ezingafaniyo.
Imeko kaBrexit isetelwe ukuhambisa kule veki ukusukela ngoku emva kokuba abaphathiswa be-EU bevumile ngemfuneko yokunika i-UK ukuhlehliswa okwesithathu kwixesha lokuphuma komdibaniselwano, nangona kunjalo, kungakhathalelwanga ukuvumelana nexesha laso.
Iimarike zehlabathi jikelele ziyaphendula kwintetho ezisisiseko ezivela e-US VP uMike Pence esiya e-China evuse ingqumbo eBeijing njengoko uqoqosho oluphambili lwehlabathi luqhubeka ngeentetho ezicwangciselwe ukugqiba imbambano eyandisiweyo yorhwebo.
Izitokhwe eWall Street zitshintshele phezulu ngolwesiHlanu ngelixa iingcali zezemali ngaphezulu kweAtlantic ziqhubeka nokujonga ukukhutshwa kweenkampani.
Kwilizwe laseYurophu, isiqinisekiso seshishini laseJamani sahlala siqinile ngo-Okthobha kunye ne-Ifo Institute yeshishini lokukhutshwa kwedatha kwi-94.6, engatshintshwanga kwinyanga ephelileyo nangaphezulu koqikelelo.
Abarhwebi ngokufanayo baphendula kwinani elikhulu leenzuzo zeshishini ngokubhekisele kwikota yesithathu ekhutshiweyo ukusukela ngoLwesihlanu odlulileyo.
Ibhanki yakwaBarclays ikwabhengeze intsilelo iyonke kwikota yesithathu njengaLwesihlanu ngolwaziso lokubethwa yi- $ 1.4 yezigidigidi ($ 1.8 yezigidigidi) zamabango kwi-inshurensi, ukanti kutshintshwe i-2.2% ephezulu ngasemva kwamanani asisiseko aqinileyo.
IBergian brewer AB InBev yathumela ikota yesithathu engathathi hlangothi ye-EBITDA (iinzuzo ngaphambi komdla, irhafu, ukwehla, kunye nokuhlawulwa kwamatyala), iphazamisa isitokhwe esisezantsi ukuya kwi-10.5%.
Impahla enkulu yaseNtaliyane iMoncler inyuke yaya kwi-10.7% emva kwengxelo yokufumana okuhle ngaphezulu kweStoxx 600, elandelwa liqela laseFrance laseKering, kwaye izabelo zalo zinyuke zaya kwi-8.1%.
Kwisiseko sesalathiso se-blue-chip yaseYurophu, izabelo ze-Intanethi eziManyeneyo zaphazamisa malunga neepesenti ezingama-20 emva kokuba inkosi ezimeleyo igxothe ukucela iyunithi yayo iDrillisch ukunciphisa iindleko zayo phantsi kwemvumelwano neTelefonica Deutschland, njengoko kubonisiwe yiReuters.
I-Ubisoft yaphazamisa phantse i-16% emva kokusika isikhokelo sayo sokufumana kunye nokuchasa ingxelo yemidlalo ethile kathathu-A.
tags Brexit, Ukuzuza kwamashishini, Izitokhwe zaseYurophu, Impikiswano yezorhwebo yase-US-China